Archive du 01/03/2012
Hosamborina Raprofy ?
Raha toa ka tsy mbola voaporofo mazava ny fitantanana tsy nahomby sy ny tsy fahaiza-miasan�ny filoha teo aloha, Marc Ravalomanana ka nandrodanana azy, dia efa miharihary tahaka ny vay an-kandrina kosa ny kitoatoan�ny FATn-dRajoelina amin�ny fitantanana ny firenena nandritra izay 3 taona izay.	Hamaky ny tohiny...	Politique
Hamory ny mpanao politika !
Misoko miadana ny fakan-kevitra ataon�ny biraom-pifandraisan�ny SADC eto amintsika.
Diniky ny samy Malagasy Olan�ity firenena ity i Andry Rajoelina, soloy ny tondrozotra
Tsy mandeha amin�ny laoniny izao tetezamita izao, manjaka n�aiza n�aiza ny tsy fandriampahalemana toy ny vono olona isan-karazany sy fandrobana mitam-piadiana.
Tsy hiala anaty fitondrana izahay !
Be ny fanontaniana nandeha fa hiala ao anaty fitondrana ny ankolafy Ravalomanana noho ireny zava-niseho tao ho ao ireny, hoy ny mpitarika ity ankolafy ity Mamy Rakotoarivelo teny amin�ny Villa Elisabeth omaly nandritra ny fanatrehana ilay Diniky ny samy Malagasy notarihan�ny Pr Zafy Albert.
Me Rasamimaka Mahefalahy
�Matahotra ny hampihatra ny sonia nataony ny FAT�
Samy manana ny fahitany sy ny fandinihany ny antony tsy nahatanteraka ny fepetra napetraky ny SADC, mikasika ny datin�ny 29 febroary ny mpanao politika Malagasy. Manana ny heviny mikasika izany koa ny CST Me Rasamimaka Mahefalahy avy amin�ny ankolafy Ravalomanana, ka toy izao ny resaka nifanaovana taminy.
Miala Rajoelina fa mampahantra ity firenena ity !
Maro ny zavatra efa noteneniko mikasika an�i Andry Rajoelina sy ny manodidina azy izay tena mampahantra ity firenena ity, hoy ny Pr Zafy Albert, tao amin�ny kabary fanokafana ny hetsika Diniky ny samy Malagasy omaly teny amin�ny Villa Elisabeth.
Taratasy hoan�i Jean
Any i Jean
Resy indray isika ry Jean omaly a ! Efa zatra resy lava isika ka tsy mahataitra intsony.
Hetsika akanjo mainty
Efa mandohalika i Gasikara
Efa tsy misy mandeha amin�ny laoniny intsony ny raharaham-pirenena, rendrika sy mandohalika i Madagasikara, horohoro sy habibiana no manjaka noho ny tsy fandriampahalemana ary tsy eran�ny ain�ny besinimaro intsony ny fahoriana vokatry ny fidangan�ny vidim-piainana, araka ny fahitan�ny vondron�olon-tsotra azy.
Efa nampoizin�ny maro ihany fa tsy hanatrika ilay diniky ny samy malagasy eny Ivandry ireo antoko sy vondrona politika manohana an�i Andry Rajoelina.